Inona avy ireo loharanom-pahefana ho an'ny paikady fanorenana?
Alefaso amin'ny famaritana ny paikady fananganana rohy. Raha Google ianao amin'ity fe-potoana ity, dia hahazo lisitr'ireo tetika izay afaka manampy anao hitandro ny rohy, fa tsy hitarika anao amin'ny tetikady fanorenana ankapobeny.
Amin'ny ankapobeny, ireo tetika ireo dia mamaritra ny foto-kevitry ny famoronana votoaty sarobidy mba hampidirana loharanom-baovao hafa ho anao. Ny hevitra iray hafa izay afaka manome ny rohy ny taranaka dia ahitana ny fananganana fifandraisana sy ny fiaraha-miasa an-tserasera; Mampirisika ny mpanjifa mba hifandray; mizara loharano ao amin'ny fiarahamoninao; mandray anjara amin'ny hetsika an-tserasera sy ny fiarahamonina.
Ireo hevitra rehetra ireo dia manan-danja sy sarobidy ho an'ny paikady fanorenana eo an-toerana. Na izany aza, izy ireo ihany no mampiseho anay ny antony mety mahatonga ny loharanom-baovao hafa hifandray amin'ny sehatra misy anao. Tsy manome valiny feno amin'ny fanontanianao izy ireo, ary manome ny antsasaky ny tetika.
Ny paikady fanorenana fifandraisana dia dingana amin'ny fanatrarana tanjona tetsy amin'ny alàlan'ny loharanom-baovao. Ny fifandraisana amin'ny fananganana tranokala dia tetikady satria ny tanjonao farany dia miankina mivantana amin'ny famonoana. Na izany aza, tsy azo atao ny manatanteraka vokatra raha tsy misy ny fomba fiasa. Raha tsy izany, ny rohy azonao dia mety na mety tsy ho toy ny tanjona tena tianao hatao.
Ity lahatsoratra ity dia natokana ho amin'ny fomba fanao marina amin'ny paikady mifototra amin'ny SEO. Andeha aloha hojerentsika hoe inona no tanjon'ilay tetikasa fampielezan-tranokely anao voalohany.
Ny antony mahatonga ny tranokalanao dia mitaky paikady fanorenana fanorenana
Mamorona fifandraisana eo amin'ny loharanon-tranonkala
Ny tranonkala tsirairay na ny torolalana sy ny haben'izy ireo dia mila backlinks. Misy ampahany manan-danja ao amin'ny rafitra Internet. Na izany aza, nahoana isika no mila rantsana ivelany?
Misy antony roa fototra tokony hodiavinao:
Mifandray amin'ny vondrom-piarahamonina an-tserasera, tranokala, ary sehatra ao amin'ny orinasa misy anao;
Manao filaharana amin'ny teny sy ny teny mavesa-danja.
Google dia manombana ny tranokalan'ny algorithma PageRank. Ity algorithm ity Google dia mampiasa backlinks avy amin'ny loharanom-pahefana hafa hanamarinana ny lazain'ny alàlan'ny pejy Internet, ny fahefana ary ny lanjany. Ity algorithm ity dia misy fiantraikany mivantana eo amin'ny toerana misy ny valin'ny tranokala ao amin'ny valin'ny fikarohana ary manandratra ny lazan'ny loharano ao amin'ny maso Google.
Ny tetikady mazava dia manan-danja ho an'ireo izay te hampiditra vola amin'ny rohy trano. Mila torolalana tanjona ankoatra ny lalam-pifandraisana tsirairay ianao. Raha tsy izany, dia tsy hisy ilàna azy ireo fanentanana sy ezaka rehetra ataonao. Noho izany, manontania fanontaniana iray momba ny antony ilainao rohy? Ny valiny mahazatra sy azo ekena indrindra amin'ity fanontaniana ity dia ny fifamoivoizana. Ny fifamoivoizana dia midika fa ny mpanjifa maro dia mety hikendry ny tranokalanao ary mety hiverina ho mpanjifa. Ny famaritana ny tanjonao dia tokony hanomboka amin'ny fikarohana fikarohana. Mila mikaroka fikarohana ianao hoe inona avy ireo fahafahana misafidy ao anaty fonosanao sy ny fomba handraisanao soa avy amin'izy ireo.
Dinihina ny fahombiazan'ny tranonkala misy anao, ny loharanom-baovao izay misy anao, ary mamorona drafitra hanatsarana azy. Amin'ny fanaovana izany dia ho afaka hampivelatra ny paikady fananganana rohy ianao Source .